जनकपुरधाम, माघ ४–नेपाल चिकित्सक संघको केन्द्रीय कार्य समितिको लागि जनकपुरसहित देशभर एकसाथ मतदान भइरहेको छ । शनिबार बिहान १० बजेदेखि सुरु भएको निर्वाचन बेलुकी ५ बजेसम्म र पुनः आइतबार बिहान १० बजेदेखि बेलुका ४ बजेसम्म हुने जनकपुरका निर्वाचन अधिकृत डा. नागेन्द्र यादवले जानकारी दिए । संघको देशभर ९ हजार ९ सय १६ जना मतदाता रहेका छन् । जनकपुर शाखाअन्तर्गत धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीमा ४ सय सदस्य रहेको डा. रामज्ञान यादवले जानकारी दिएका छन् । संघको १३ सदस्यीय समितिका लागि २ प्यानलमा ७ जना पदाधिकारी र ६ जना सदस्यको उम्मेदवारी परेको छ ।
प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा भइरहेको मतदानमा ४ सय मतपत्र प्राप्त भएको केन्द्रका अधिकृत डा. नागेन्द्र यादवले जनाए । उनका अनुसार उपत्यकाबाहेक देशभरको १७ निर्वाचन केन्द्रमा मतदान भइरहेको छ । काठमाडौमा १७ र १८ गते मतदान भएपछि देशभरबाट संकलन गरिएको मतपत्र एकै ठाउँमा राखेर १८ गते साँझदेखि मतगणना हुने डा. यादवले बताए ।
काग्रेस समर्थित प्रजातान्त्रिक प्यानलबाट अध्यक्षमा डा. लोचन कार्की, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा डा. शिवप्रसाद श्रेष्ठ, उपाध्यक्षमा डा. अनिल विक्रम कार्की, सचिवमा डा. बद्री रिजाल, सहसचिवमा डा. निरजकुमार सिंह, कोषाध्यक्षमा डा. प्रकाश बुढाथोकी, सहकोषाध्यक्षमा विश्वराज द्विवेदी रहेका छन् ।
नेकपा र मधेसवादी दलहरुको संयुक्त प्यानलअन्तर्गत पेशागत समावेशी समूहको तर्फबाट अध्यक्षमा डा. पुष्पमणि खनाल, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा डा. रक्षा श्रेष्ठ, उपाध्यक्षमा डा. रन्जितकुमार झा, सचिवमा डा. मधुर बस्नेत, सहसचिवमा डा. शैलेन्द्र झा, कोषाध्यक्षमा संजिवकुमार झा, सहकोषाध्यक्षमा डा. उदय नारायण रहेका छन् ।